သနပ်ခါးမေ: October 2011
Nail Art (Girly Pink)
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:44 AM လက်​သည်း ( nail art )
ဒါလေးက မဘေဘီ ရဲ့ ဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ tutorial လေးကို ပြန်လုပ်ကြည့်ထားတာပါ။ လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိပါသေးတယ်။ အစ်မတော့ ဒါကိုမြင်ပြီးရင် စိတ်ဓာတ်ကျမလားပဲ။ :P
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပန်းရောင် ကို အပြည့်ဆိုးပါတယ်။
ရေစိုလက်သည်း အတွက်၊ ခရမ်းနုရောင်ကို မိတ်ကပ် sponge နဲ့တို့ပြီး လက်သည်းထိပ်လေးတွေကို လိုက်တို့ပါတယ်။
လက်သည်းထောင့်လေးတွေကို သွားကြားထိုးတံကို သုံးပြီး အဖြူ အစက် ငါးစက်ချပါ။
ပြီးရင် အလယ်မှာ ဝတ်ဆံ အတွက် ရွှေအိုရောင်ကို အစက်ချပါတယ်။
သွားကြားထိုးတံကို အသစ်လဲလိုက်ပြီး အစက်ချထားတဲ့ ရွှေရောင်ဆီကနေ ပွင့်ဖတ်တွေဆီသို့ ဆွဲလိုက်ပါ။
စိတ်ကူးရှိရင်ရှိသလို ပန်းပွင့်နေရာ၊ အရေအတွက်နဲ့ နောက်ခံအရောင်တွေ ကိုယ့် version နဲ့ကိုယ် ပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်ရှင်။
ရေစို အတွက် အရောင်နှစ်ရောင်လုံးကို တစ်ထပ်တည်းဆိုးရင် သိပ်မထင်တဲ့ ပုလဲရောင်လေးတွေကို သုံးထားပါတယ်။
ပျော့တဲ့ မိတ်ကပ် sponge နဲ့ လုပ်ရင် ပုံထွက်ပိုကောင်းပါတယ်။
သွားကြားထိုးတံ ဆိုးဆေးအရည်ထဲမှာကြာကြာနှစ်လေ၊ အစက်ရဲ့ အရွယ်ကြီးလေပါ။
အပိုပစ္စည်းမလိုတဲ့ အားလပ်ရက် အပျင်းပြေ လုပ်ကြည့်ချင်စရာလေး တစ်ခုပါ။
စာလုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေလို့ ဘလော့လေးနဲ့ ခဏအဆက်ဖြတ်ထားရတော့မယ်။ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ အကုန်လုံးကို သတိရနေမှာပါ။ ဝန်ပိနေတာတွေ လျော့တာနဲ့ တက်ခဲ့ပါမယ်နော်။ သနပ်ခါးမေ ဘလော့လေးကို အစဉ်တဆိုက် အားပေးသူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များကို ကျေးဇူးတင်လျက်-
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:27 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
သူများတွေ မိတ်ကပ်လိမ်း နေ့တဝက်ထိအလှမပျက်၊ ကျွန်မမှာတော့ ချွေးပေါက်ကျယ်လို့ မျက်နှာအဆီတဝင်းဝင်းနဲ့။ မိန်းကလေးဆိုတော့၊ ဒီတိုင်းကြည့်လို့ ချွေးပေါက်အထင်းသားမြင်ရတာ သိပ် ဘဝင်မကျလှပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဟိုနေ့က ကုန်ကြမ်း လိုက်ရှာနေတုန်း Bellasugar က၊ How to get Rid of Large Pores : DIY Egg White Treatment တွေ့လို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အစ်မရို့စ်လည်း အဲလို လိမ်းတယ်ဆိုတော့၊ စမ်းရတာ အားရှိတာပေါ့နော်။
လုပ်မယ်ဆို လိုအပ်တာက ကြက်ဥ တစ်လုံး။ :)
အနှစ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီး၊ အကာကို ပန်းကန်လုံးထဲမှာထည့်ပါ။
ဇွန်း နဲ့ အဖြူရောင်အမြှုပ်လေးတွေထတဲ့အထိ နာနာခေါက်ပါ။
ပြီးရင် cotton pad လေးကိုယူ၊ မျက်နှာအနှံ့မှာ လိုက်လိမ်း။ ၅ မိနစ်လောက်နေရင်၊ မျက်နှာ တင်းတင်းလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကုန်ခြောက်သွားရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး၊ ထူးခြားမှုကို ခံစားကြည့်ပေါ့နော်။
တွေ့ရှိချက် ။ ။
လုပ်ရတာလွယ်ပြီး၊ မျက်နှာ တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတယ်။ နောက်တရက် သိပ်အဆီမပြန်တော့ဘူး။ ဟိုတခေါက် လှချင်ရက်စက်စက်ယို တုန်းကလို ဝက်ခြံလည်း ထွက်မလာဘူးရှင့်။ :)
ကြက်ဥနံ့တော့ နည်းနည်း သည်းခံရတာပေါ့နော်။
အိုမီဂါ သရီး (Omega3fatty acid)
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:36 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
လူခန္ဒကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ မပြည့်ဝ ဆီတစ်မျိုးပါ။ အဆီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကြမ်း CH3 - C- ..COOH ရှိတဲ့အနက်မှာ၊ ပထမဆုံး double bond (C=C) ဟာ CH3 ဘက်ကရေရင် သုံးခုမြောက်မှာ ရှိနေလို့ ၊ n3 fatty acid / အိုမီဂါသရီး လို့ ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
n3 fatty acid အများကြီးရှိတဲ့အနက်မှာ ထင်ရှားတာတွေကတော့ alpha linoleic acid (ALA)၊ eicosapentoic acid (EPA) ၊ နဲ့ docosahexaenoic acid (DHA) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာ အနေနဲ့ EPA ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံလေးပါ။ ၃ လို့ ရေးထားတဲ့ နေရာ မှာ အကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းရှိလို့ n3 fatty acid လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နို့တိုက်သတ္တဝါတွေမှာ n3 fatty acid ကို မဖွဲ့စည်းနိုင်ပေမယ့်၊ ALA မှတဆင့် EPA, DHA ကို ကူးပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အိုမီဂါ သရီးကို ၁၉၃၀ကျော်ကတည်းက ပုံမှန်ကြီးထွားဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေး အခန်းကဏ္ဌမှာပါဝင်တာကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပါပုံတွေကို ၁၉၉၀နောက်ပိုင်းမှာ တဟုန်တိုး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရေးပါပုံကို စတင်တွေ့ရှိပုံက 1970 မှာပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းမှာ Greenland ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ ဒေသခံတွေဟာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထက် အသားကို များများစားပေမယ့် တခြားလူမျိုးများထက် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာ အဖြစ်နည်းတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ရင်သား၊ အူမကြီးနဲ့ ဆီးကျိတ် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွါးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ DHA ပမာဏ သွေးနီဥနံရံမှာများများရှိခြင်းဟာ၊ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းခြင်းနဲ့ စပ်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသား ၃၄၀၀ ပါဝင်တဲ့ သုတေသန မှာ၊ သွေးထဲ အမြင့်ဆုံးပါတဲ့အုပ်စုဟာ၊ အနည်းဆုံးရှိတဲ့ အုပ်စုထက် အလျင်အမြန်ပျံ့ပွါးနိုင်တဲ့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွါမှု ၂ဆခွဲပိုနည်းပါတယ်။
၂၀၀၇မှာပြုလုပ်တဲ့ တွေ့ရှိချက်မှာတော့၊ ကင်ဆာရောဂါသည်တွေ ကို အိုမီဂါသရီး ပေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ အစားစားချင်စိတ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ဆက်လက်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ ကာလ (survical year) ပိုရှည်သွားပါတယ်။
၁၉၉၉မှာ GISSI-Prevenzione က လတ်တလော heart attack နှလုံးပုပ်ခြင်း (myocardial infarct) ရထားခံရတဲ့ လူနာများကို ပေးကြည့်တဲ့အခါ၊ သေဆုံးမှု၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊ ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်သေဆုံးခြင်းတို့ကို 20%, 30%, 45% ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး လျှော့ချပေးနိုင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။။
American System of Health System Pharmacy ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သွေးတွင်းအဆီပမာဏ triglyceride သိသိသာသာများနေသူများကို EPA, DHA နဲ့ monounsaturated fatty acid အ ရော ၄ ဂရမ်ကို ပေးကြည့်တဲ့အခါ triglyceride ပမာဏဟာ45% လျော့ကျသွားပြီး၊ VLDL (very low density lipid) ပမာဏဟာ 50% လျော့ကျသွားပါတယ်။ VLDL ဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ သေဆုံးမှုမှာပါဝင်တဲ့ အဓိကတရားခံပါ။
၂၀၀၇ ဂျပန်မှာ ပြူလုပ်တဲ့ သုတေသနအရ၊ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ သကြားပမာဏကို ကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့ ဆီးချိုဝေဒီနာရှင်များရဲ့ တဝက် ကို ပေးကြည့်တဲ့ အခါ၊နှစ်နှစ် ကြာတဲ့အခါ ဦးနောက်ကို သွားတဲ့ သွေးကြောမ (carotid artery) ရဲ့ ကျဉ်းနေတဲ့ နေရာတွေဟာ၊ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားပါတယ်။
သူ့ဆီမှာ နှလုံးတုန်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးတဲ့ အပြင်၊ သွေးပေါင်ချိန် (အပေါ်သွေး) ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အာနိသင်အနည်းငယ်လည်းရှိပါတယ်။
၉လမှာ ၁၂လကြားမှာရှိတဲ့ ဒတ်ရှ် ကလေးငယ်တွေရဲ့ အစာထဲကို ငါးကြီးဆီ ထည့်ကြွေးတဲ့အခါမှာ၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဟာ တခြားကလေးများထက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
စိတ်ကဆင့်ကလျားရောဂါ (schizophrenia) ရှိတဲ့ သူတွေမှာ အိုမီဂါသရီးနဲ့အိုမီဂါ၆ ပမာဏဟာ ပုံမှန်သူတွေထက်သိသိသာသာလျော့နည်းနေပါတယ်။ Schizophrenia ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ EPA, DHA ပေးတာက ရောဂါ ဖြစ်လာမှုကို ၉၅%အထိလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အသက်ကြီးရင့်လို့ မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတော့ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်မှာတစ်ခါငါးစားပေးတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဟာ မစားသူတွေထက် ကလေး ပေါင်မပြည့်ခြင်း၊ လမစေ့ပဲ မီးဖွားခြင်းတို့ကို ၂၇% လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
တနေ့တာလိုအပ်ချက် ဘယ်လောက်ပြည့်မှီအောင်စားရမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့်၊ တနေ့တာ ယောက်ျားဆိုရင် 1.6gram ၊ နဲ့ မိန်းမဆိုရင် 1.1 gram အထိ စားသုံးခြင်းကို လက်ခံထားပါတယ်။
အိုမီဂါ သရီး ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ
အဆီထူသော ပင်လယ်ငါး (ဆော်လမွန်၊ မက်ကရယ်၊ ငါးသတ္တာ စသည်)
၂၀၀၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ FDA ရဲ့ ကြေညာစာတမ်းအရ EPA+ DHA တနေ့တာစားသုံးမှုဟာ ၄ ဂရမ်ထက်ပိုလာပြီဆိုရင်တော့ -
ကိုယ်ခန္ဒာကို ဘေးဖြစ်စေမယ့် ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများ စုပုံခြင်း
မကောင်းသောအဆီ LDL များသွေးထဲများလာခြင်း နဲ့
ဆီးချိုဝေဒီနာရှင်များ သွေးထဲသကြားဓာတ် control မရခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
နှလုံး လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းသူများ (congestive cardiac failure) နဲ့ ကာလတာရှည် နှလုံးအောင့်ခြင်း (chronic angina pectoris) ခံစားနေသူများအနေနဲ့လည်း omega3 ကိုမသောက်ခင် မိမိဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးကို wikipedia မှ ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သူမို့၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ငါးကြီးဆီ ကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ပါတယ်။
Nail Art (M's Retro Blue)
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:12 PM လက်​သည်း ( nail art )
ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိရာ လုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးပါ။ (M's Retro Blue လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်)
ကွန့်တာများသွားတော့ ရှုပ်များရှုပ်နေသလား မသိနော်။ တဆင့်ချင်းကြည့်သွားရင် အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ သွားကြားထိုးတံက လွဲရင် ဘာတန်ဆာပလာမှ မလိုပါဘူးရှင်။ ပျိုမေတွေ သဘောကျတဲ့အဆင့်အထိပဲ၊ ဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဘေးနှစ်နားကို သွားကြားထိုးတံသုံးပြီး အစက် လေးစက်စီ ချပါ။
လက်သည်း အလယ်မှာ ဆိုးဆေး အဖြူရောင်ကို အပြားလိုက် ဆွဲပါ။
ပြီးရင် အပြာရောင်ကို လက်သည်း အခြေမှ အနည်းငယ်ခွါပြီး ဆွဲပါ။
ဒါဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးရပါပြီ။
နည်းနည်းလေး ထပ်ဆန်းချင်ရင် အလယ်မှာ အစက်သုံးစက်ချ နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်ရင် အပြာရောင်ပေါ်မှာ အဖြုရောင်ကို အပြားလိုက်မဟုတ်ပဲ ဆိုးတံကို နည်းနည်းလှည့်ပြီး ဆွဲပါ။
အပေါ်ကနေ အပြာရောင် အစက်ကလေးတွေ ချလိုက်ရင်၊ pattern ဆန်းဆန်းလေးရပါပြီနော်။
စာဖတ်သူပျိုမေတွေရော၊ ပြထားတဲ့ Basic ၊ Option (1)၊ Option (2) ထဲမှာ ဘယ်ဒီဇိုင်းလေးကို နှစ်သက်ပါသလဲ? အဆင်ပြေရင် ဖြေသွားပေးကြပါနော်။
DIY coffee ခွက်အောက်ခံ သိုးမွေးရက်နည်း
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:18 AM DIY
ကိုယ်တိုင်လုပ် ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ခန်းကို အလှဆင်ချင်သူပျိုမေများအတွက် ကတ်ထူကိုသုံးပြီး သိုးမွေးနဲ့ ကော်ဖီခွက်အောက်ခံ ရက်နည်းလေး ပါ။ လွယ်လည်းလွယ် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာတာမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကတ်ထူစာရွက်တစ်ရွက်ရှာလိုက်ပါ။ မရှိရင် စာရွက်ကို လေးခေါက်ခေါက် လို့လည်းရပါတယ်။
စာရွက်ရဲ့ ဘေး တစ် ဘက် ကို အခုလို အစိတ်လေးတွေ ညီညီညာညာ စိတ်ပါမယ်။
ပြီးရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားကိုလည်း ယခုလို လိုက်စိတ်ပေးပါ။
ကတ်ထူအစွန်မှာရှိတဲ့ မြောင်းလေးထဲ သိုးမွေးစကို အခုလို လျှိုသွင်းလိုက်ပါ။
သူ့ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ မြောင်းလေးထဲကို သွယ်တန်းပါမယ်။
တစ်ဘက်သို့လှန်ပါ။ သူ့အောက်ကပ်လျက် မှာရှိတဲ့ မြောင်းထဲကို ပြန်ထည့်ပါ။
အဆင့် 3, 4,5 ကို အစိတ်လေးတွေအပြည့်ကုန်သည်အထိ လိုက်ကျော့ပေးရပါမယ်။
ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရောင်ရှိတဲ့ သိုးမွေးစကိုယူပြီး တစ်ပင်ခြား အတန်း ကုန်သည် အထိလျှိုပါ။
ထိပ်တစ်ဘက်ကိုရောက်ရင်၊ ခုနလို တပင်ခြားပြန်လျှိုပေးရပါမယ်။
အဆင့်6နဲ့7 ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတန်းရတဲ့အထိထိုးသွားပါ။
အပင်အရောင်ပြောင်းချင်ရင် ထိပ်ဘက်မှာ အခုလို ကြိုးရှည်ရှည်ထားပြီး ချန်၊ နောက်တစ်ပင် ကို အတန်းအသစ်အနေနဲ့ အစပျိုးရပါမယ်။
လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားရောက်ပြီဆို အပြီးသပ်ဖို့ ကြိုးစလေးတွေလိုက်သိမ်းရပါတယ်။
ကြိုးစသပ်နည်းလေးက၊ ထွက်နေတဲ့ကြိုးစကို bobby pin ဆံညှပ်ကလစ် ကြားထည့်ပါ။
ပြီးရင် ရက်ထားတဲ့ နီးရာအတန်းထဲကို အခုလို ထိုးထည့်လိုက်ပါ။
စစချင်းတုန်းကမြောင်းတွေထဲချိတ်ထားတဲ့ကြိုးစလေးတွေကို ပြန်နှုတ်လိုက်ရင် ဒီလိုပုံစံလေးရပါပြီ။
မြတ်ကြည်ရဲ့ ခွက်က ကြည့်မကောင်းတော့လို့ ငါးကြီးဆီပုလင်းနဲ့ပဲ ကြော်ညာလိုက်ပါတယ်။ :D
ဘေးသားတွေကို ကွင်းလိုက် မထားချင်ရင်၊ ကွင်းကို အလယ်ခေါင်မှာညှပ် ပြီး၊ အစနှစ်ဖက်ကို အခုလို ချည်လိုက်ပါ။ ပိုသပ်ရပ်သွား ပါတယ်။
အခုဖော်ပြတဲ့ tutorial လေးကို http://www.lilmagoolie.com မှာဖော်ပြထားတဲ့ weave with cardboard နည်းလမ်းကို ယူပြီး၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလေးနဲ့ တွဲတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
DIY ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ ပျိုမေတွေ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အိမ်ကို ဧည့်သည်လာတော့၊ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာလေးနဲ့ ဧည့်ခံလို့ရတာပေါ့နော်။
သဘာဝ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (for dry skin)
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:43 AM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
ဆောင်းရာသီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ စိုထိုင်းဆဟာ မိုးရာသီထက်စာရင် အတော်လေး နည်းသွားပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာရှိတဲ့ အသားအရေ ရေဓာတ်ပမာဏဟာ၊ နွေရာသီထက်တောင် ပိုနည်းတယ်ဆို အံ့ဩကြမလားပဲ။
ပုံမှန်အဆီပြန်တတ်တဲ့သူအတွက်တော့ ဒီ ရာသီဟာ၊ အလှပဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေမယ့်၊ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့၊ လိုးရှင်းတွေဝယ်လိမ်းရ၊ face pack တွေ အုပ်ရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တဲ့ကာလပါပဲ။
ဒီနည်းလေးကတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေ စိုပြေဝင်းပတဲ့ အသားအရေရဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ အိမ်မှာတင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလေးပါ။
အသုံးပြုမယ့် ပစ္စည်းတွေက -
အရင်ဆုံး ငှက်ပျောသီးတဝက်နဲ့ ထောပတ်သီးတဝက်ကို ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီး ခြေပေးပါ။ ကျေသွားပြီဆို အနှစ်ဖယ်ထားတဲ့ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ထည့်ပြီး သမအောင်နယ်၊ ပြီးရင် မျက်နှာပေါ်ခပ်ဖွဖွလေးလူးထားပြီး မိနစ် ၂၀ လောက် ထားထားလိုက်ပါ။
အချိန်ပြည့်ပြီဆို ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာပြန်သစ်ပါ။ မျက်နှာ နဂိုကထက် ပိုမိုနူးညံ့ ဝင်းပသွားတာကို ခံစားမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
1) ကျန်တဲ့ ငှက်ပျော်သီးနဲ့ ထောပတ်သီး တဝက်ဆီ ဘာလုပ်ရပါမလိမ့်? သူတို့တွေကို ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့လုံအောင်ပတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တ္တထဲ ထည့်သိမ်းထားပါ။ တစ်ပတ်လောက် အေးဆေးခံပါတယ်။
2) ငှက်ပျောသီးမှာ ခန္ဒကိုယ်ဆဲလ်တွေ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်ထုတ်ရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေ အများကြီးရနိုင်ပါတယ်။
3) ထောပတ်သီးကတော့ အသားအရေအစိုဓာတ် (moisture) ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အစိုဓာတ်ပိုရချင်ရင်တော့ ဒိန်ချဉ် အနည်းငယ် ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။
* ဒီနည်းလေးက အဆီပြန်တဲ့သူတွေ လုပ်လို့မရဘူးနော်။ ဝက်ခြံပေါက်တတ်တယ်။
October Avon promotion သတင်းကောင်း
By **~ မြတ်ကြည်~** 1:01 PM Website လမ်းညွှန်
Avon cosmetics တွေ promotion ချနေပြီနော်။ Extralasting series products ထဲက တစ်ခုကို မှ ၅ ဒေါ်လာနီးပါးဆိုတော့မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ 50% ကနေ 65% discount တွေအထိ ရှိတယ်ဆိုတော့ မဝယ်တောင်မှ လက်မလွတ်ရလေအောင် သွားကြည့်ကြပါလို့။ ဘလော့ပို့စ်တွေ မတင်ဖြစ်တာနဲ့ online ရှော့ပင်ထွက်တတ်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ပါတယ်နော်။ Shopping ထွက်ဖို့ လင့်ခ်လေးက ဒီမှာပါရှင်။
လှချင်ရက်စက်စက်ယို (charcoal peel-off mask)
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:40 PM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
သီတင်းကျွတ်ပြီနော်။ မင်္ဂလာဆောင်များရှိရင် ဖိတ်ကြနော်။ စားရမယ်ဆို တကူးတကကို လာစားမှာ။ သီတင်းကျွတ် အချိန်အခါသာမယမှာ လှချင်ရက်စက်စက်ယို ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီလိုပါရှင်။
ကျွန်မ ရှာလကာရည်နဲ့ ဆံပင်ဆိုးတဲ့ နေ့တုန်းက နေပူထဲနေရမယ်ဆိုလို့ ကျောင်းအနီးအနား ဟိုလျှောက်လျှောက်ဒီလျှောက်လျှောက် လုပ်နေတုန်း၊ Daiso (တစ်ထောင်တန်ဆိုင်) မှာ charcoal pack -peel off mask ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဝယ်လာလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ နှာခေါင်းမှာ ဆားဝက်ခြံလေးတွေရှိတယ်လေ။ ဒါနဲ့ပေါင်းတင်မယ်ပေါ့။ အဲဒီထဲမှာပြထားတာ မျက်လုံးရယ်၊ ပါးစပ်ရယ် ချန်ပြီး လိမ်း၊ ခြောက်က်ရင်ပြန်ခွါ။ ဟုတ်နေတာပဲ။
မနေ့က စာတွေလုပ်ရင်း ဆက်မလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ ဝယ်ထားတာလေး စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့။ လိမ်းတုန်းကတော့ အကောင်းသား၊ ခြောက်လို့ပြန်လည်းခွါရော၊ ဆံပင်က လိမ်းဆေးနဲ့ကပ်သွားတော့ နားသန်စက ဆံပင်တွေ ဆွဲနှုတ်မိပါလေရော။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မျက်ခုံးမွေးတချို့တဝက်လည်းပါသွားတယ်။ (အဟင့်) ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ရပါဘူးရှင်။ ချွေးပေါက်ပိတ်သလိုဖြစ်ပြီး ဒီမနက် ဝက်ခြံပိစိလေးတွေ အများကြီးထွက်နေပါပြီ။ အခုဆေးပြန်လိမ်းနေရတယ်။ လှချင်ပါတယ်ဆိုမှနော်..
တစ်ခုတော့ကောင်းတာပေါ့လေ။ နောက်တခါဆို ရှောင်ရှားလို့ရတာပေါ့။ ပေါပေါတွေဆို ရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါလို့။ လှချင်ရက်စက်စက်ယို ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်လေးတွေ ရှိလာရင်လည်း၊ ထုတ်လွှင့်ပြသပါဦးမယ်။ :P
စာဖတ်သူပျိုမေတွေ နေ့တစ်နေ့ကို အပြုံးများနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေရှင်။
Happy Thadingyut!!! (October 13th, 2011)
သဘာဝနည်းအတိုင်း Highlight ဖောက်ကြမလား?
By **~ မြတ်ကြည်~** 1:08 AM ဆံပင်
ဒီတပတ် တနင်္ဂနွေ ဘယ်မှ လျှောက်မလည်တော့ ehow မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လျှောက်ရှာရင်း သဘာဝအတိုင်း Highlight ဖောက်နည်းလေး မှာတွေ့တာနဲ့ ပြန်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း တွေက ရှာလကာရည်ရယ်၊ သံပုရာရည်ရယ်ပါ။
ရှာလကာရည်က ဆံသားမှာကပ်ငြိနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ conditioner နဲ့ hair products တွေကို စင်ကြယ်စေရုံသာမကပဲ ဆံပင်သားကို ပိုပြီး တောက်ပြောင်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဦးရေမှာရှိသင့်တဲ့ pH ပမာဏရအောင်လည်း ညှိပေးတာမို့ ဗောက်ဖြစ်စေတဲ့မှိုပေါက်ဖွားခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်ပန်းကန် တစ်ဝက်ကို ရှာလကာရည်၊ နောက်တဝက်ကို သံပုရာရည်ထည့်ပြီး ကိုယ်ဖောက်ချင်တဲ့ ဆံပင်စမှာ သုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် နေပူထဲမှာ ၁၀ မိနစ် လောက် နေပူစာလှုံပေးပါ။ ပိုပြီးအရောင်ဖျော့ချင်ရင်တော့ မိနစ် ၂၀လောက် ပိုနေပေးပေါ့နော်။
သူက ခေါင်းမလျှော်ရသေးတဲ့ ဆံပင်မှာဆိုပိုပြီး သိသာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆံပင်မှာ အဆီရှိလေ ပိုပြီး ဓာတ်ပြုနိုင်လေဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီနည်းက တခဏပဲ ခံမှာပါ။ ဒီတော့ မကြိုက်ရင်လည်း ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင် နဂိုဆံပင်ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မလား?? စမ်းသပ်ပြီးသွားပါပြီရှင်။ ( မြန်တယ်နော် ^_^)
တွေ့ရှိချက်။ ။ ဆံပင်က highlight ဖောက်သလောက်တော့ မဖြစ်သွားပါဘူး။ နည်းနည်းလေးတော့ ညိုသွားပါတယ်။ ဆံပင်သား ပိုပြီး ပျော့သွားတာကတော့ ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
နောက် Michelle Phan နည်း ကတော့ ဆံပင်အရောင်ဖျော့ဖို့ သံပုရာသီး ကို ဆံသားမှာ ပွတ်ပြီး နေပူစာလှုံတဲ့နည်းပါ။ ဆောင်းပါးလင့်ခ်လေးကတော့ ဒီမှာရှိပါတယ်ရှင်။
စာဖတ်သူများအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေးတစ်နေ့ ဖြစ်ပါစေ။
Deep Blue Sea လက်သည်း ( ရေစို)
Loop Ponytail (တဝက်စည်း)
နှုတ်ခမ်းနီ တနေ့တာ မြဲစေဖို့
ပျိုမေ နှင့် ကယ်လိုရီ